တစ်ဦးက '' finish '' ဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦးကကွန်တိန်နာရဲ့လည်ပင်း finish ကိုတစ်ဦးသင့်လျော်သောတံဆိပျကိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောပိတ်သိမ်း၏အရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစားဆုံးဖြတ်သည်။ တစ်ဦးကကွန်တိန်နာနှင့်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာထုပ်ချောကိုက်ညီခဲ့ကြရပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျနော်တို့နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောချော၏စတိုင်များနှင့်မည်သို့အသီးအသီးကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ အင်စတီကျု (GPI), မြောက်အမေရိကဖန်ကွန်တိန်နာစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားပြုနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့, ထုတ်ပိုးအဆိုပါ Glass ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းဖြတ်ပြီးလည်ပင်းချောစံဖို့မူဝါဒများန့ ်. သိရသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် Thread စဉ်ဆက်မပြတ်ချည်ပိတ်ပစ်တစ်ဘယ်ဘက်မျဉ်းစောင်းများကကွဲကွာနှစ်ခုနံပါတ်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပါတယ် "ဟုမှန် CT" -abbreviated (ဟောင်း။ 38/400) ။ ပထမဦးဆုံးအရေအတွက်ကိုမီလီမီတာတိုင်းတာသောပေးထားသောပိတ်သိမ်း၏အချင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါဘယ်ဘက်မျဉ်းစောင်းပြီးနောက်တွေ့ရသောဒုတိယနံပါတ်, တစ်ဦးအထူးသဖြင့် finish ကိုစတိုင်လ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
Lug -also တစ်ဦး "ဟာ Off Twisted" finish ကို (အတိုကောက် "ကို T / O") အဖြစ်လူသိများ, Lug ချောသာဖန်ကွန်တိန်နာတွင်တွေ့နေကြပါတယ်။ Lug ချော -38mm T က / O T က / O (Twisted-OFF အဘို့အတိုကောက်) ကနောက်တော်သို့လိုက်အချင်း (ဆိုလိုသည်မှာ 38mm) အဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်
"T က" Dimension
အဆိုပါချည်၏အပြင်ဘက်အချင်း။ သည် "T က" ရှုထောင်၏သည်းခံစိတ်အကွာအဝေးပုလင်းနှင့်ပိတ်သိမ်းကြားရှိအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
ပုလင်းလည်ပင်းများ၏အတွင်းစိတ်အချင်း။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် "ငါ" ပြွန်ဖြည့်ဘို့ရှင်းလင်းရေးခွင့်ပြုရန်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည်။ Linerless တစ် plug ကိုသို့မဟုတ်မြေယာတံဆိပျမြားနှငျ့ပိတ်ပစ်, နှင့် dispensing ပလပ်နှင့် fitments သင့်လျော်မထိုက်မတန်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ထား "ငါ" ရှုထောင်လိုအပ်သည်။
"S" ကို Dimension
ပထမဦးဆုံးအချည်ရဲ့ထိပ်အစွန်းဖို့ finish ကိုထိပ်ကနေတိုင်းတာ။ အဆိုပါ "S" ကိုရှုထောင်ပုလင်းမှပိတ်ပစ်နှင့်ပုလင်းများနှင့်ဦးထုပ်အကြားချည်တွေ့ဆုံမှု၏ပမာဏ၏တိမ်းညွတ်ဆုံးဖြတ်သည်သောသော့ချက်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။
လည်ပင်း၏အပြင်ဘက်အချင်း။ က "အီး" နှင့်နှစ်ဦးကို ချ. ဝေဖန် "T က" ရှုထောင့်အကြားကွာခြားချက်ဟာချည်မျှင်တိမ်အနက်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
"H ကို" Dimension
လည်ပင်း finish ကို၏အမြင့်။ အချင်း "T က" ချတိုးချဲ့ရှိရာအမှတ်ဖို့လည်ပင်းထိပ်ကနေတိုင်းတာ, ပခုံးဖြတ်။